तिथि मेरो पत्रु » एक पहिलो तारीख मा कसले तिर्नुपर्छ – पुरुष लागि सल्लाह
यो डेटिङ गर्न आउँदा मानिसहरू फांसी-अप को सबै प्रकार छ, र शायद सबै भन्दा साधारण को एक जोड वा मिति लागि तिर्ने बारेमा नकारात्मक बन्नु हो. मानिसहरू यो तनाव अलग प्रतिक्रिया. केही मानिसहरू सधैं तिर्न, तर गोप्य चेक लेखन whilst भित्र नकारात्मक महसुस. केही मानिसहरू आधा प्रत्येक तिर्ने जिद्दी र केही मानिसहरू यसबारे सादा रिसाउँछन्. तिनीहरूले बिल तिर्न प्रदान यदि कोही पुरुषहरू साँच्चै बस जमानाको पुरानो स्पष्ट डराउँछन्.
म सिर्फ तला बाहिर एक पहिलो तारीख मा पूर्ण तिर्न इन्कार गर्ने मानिसहरूको थाहा, बरु बिल आधा मा बिल्कुल विभाजित गर्नुपर्छ भनेर जोड. किन? तिनीहरूले एक महिला संग एक महंगा मिति लागि तिर्ने यति धेरै अनुभव गरेका छन् किनभने मात्र फेरि उनको सुन्न कहिल्यै. शायद तिमी यो के गरेको छ. सायद यो तपाईंलाई रुचि एक महिला थिइन् र तपाईं संग vibing लाग्थ्यो, त्यसैले तपाईं तिर्न चढाइने, केवल उनको गायब छ र आफ्नो कल फेरि कहिल्यै गर्न. अथवा तपाईं धेरै mediocre वा darned सही भयानक मिति लागि भुक्तानी छन् र तपाईंलाई यो मन. सबै कि बर्बाद कडा-कमाएका नगद. अनि म साँच्चै भन्ने कुरा प्राप्त. कसले दुखेको महसुस गरेनन्!
समानता यी समयमा किन एक मानिसले एक मानिस छ किनभने बस बिल सम्पूर्ण लागत खुट्टा आशा गर्नुपर्छ? महिला समानता चाहन्छन्, राम्रो यहाँ यो छ.
मलाई तपाईं एक सानो गुप्त सुनौं. यो तपाईं हो भने, र पहिलो मिति मा उनको तिर्ने आधा जोड हो, यो कुनै पनि राम्रो गुण स्त्रीवाचक महिला दूर तर्साउन हुनेछ. तपाईं म तिनीहरूले मिति मानिसहरू वरिपरि आफ्नो स्त्रीवाचक ऊर्जा मा हुने मेरो महिलाहरु ग्राहकहरु सिकाउन देख्न, यो राम्रो तरिका काम गर्दछ. यो रोमान्स उसलाई एक मानिस शान प्राप्त र अनुमति अर्थ. तपाईं दुवै आफ्नो पुरुषत्व ऊर्जा हुन सक्दैन, अन्यथा रोमान्स फस्टाउने सक्दैन. यो अधिक आफ्नो सबै भन्दा राम्रो जोडीलाई डेटिङ जस्तै हुनेछ, जाहिर गर्ने आधा बिल तिर्न दिनुहुन्छ. म आफ्नो निराशा बुझ्न जबकि त्यसैले, म अत्यधिक gentlemanly कुरा गर्न जारी र तिर्न भेटी सिफारिस गर्दछौं. एक गुणवत्ता महिला साँच्चै यसको लागि तपाईं सराहना गर्नेछन्.
अनि मात्र तिमी जस्तै महिला संग के छैन. हरेक मिति मा तिर्न प्रस्ताव. यसको वाहेक यस बस अविश्वसनीय राम्रो फारम र असल बेहोरा छ भन्ने तथ्यलाई देखि, ब्रह्माण्डको हेरिरहनुभएको छ र तपाईं एउटा राम्रो काम गरिरहेका छन्. यो लुक्न छैन.
म साँच्चै राम्रो हुने थियो कि एक तिथि मा एक थियो. तर अन्तमा मान्छे वास्तवमा ठीक के खाने र पिउने थियो जो अनुसार बिल विभाजित गर्न एक calculator बाहिर ल्याए (राम्रो म यो आफ्नो फोन तर अझै पनि मा calculator थियो विचार). जस्तै नै यो के भयो म पहिले सही मलाई बाहिर पलायन महसुस गरिएको थियो सबै आकर्षण महसुस. वाह! म यस जस्तै कसैले साथ हुन कल्पना कहिल्यै सक्छ – उहाँले यो जस्तै छ भने अब त्यो जीवन बिताउन कस्तो हुनेछ भनेर कल्पना! तपाईं फर्नीचर को लागि Ikea मा सपिङ्ग कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो जन्मदिन मा के, म पनि त आधा तिर्न हुनेछ? धेरै रोमान्टिक छैन.
बस यसबारे हँसिलो भएर तिर्ने सन्दर्भमा Jaded नबन्न. मा कुनै न कुनै र डेटिङको Tumble, महिला केही तपाईं आफ्नो कल फर्कने गायब हुनेछ बाहिर ले र छैन. यो पाठ्यक्रम को लागि बराबर छ. म तपाईं आफैलाई संग बोल्दा एकदमै इमान्दार छन् भने तपाईं कहीं लाइन साथ कसैले गर्न नै गरेका छन् शर्त. तथापि, आफ्नो महिला साथ आएको गर्दा, र तपाईं उनको विशेष महसुस बनाउन र तपाईं तिर्न चढाइने छ किनभने रोमान्स सिर्जना, मात्र यो आकर्षण माथि र्याम्प हुनेछ, तर त्यो बलियो लागि तपाईंलाई चिन्न, तपाईं पुरुषत्व मानिस.
त्यसैले म जमानाको पुरानो हुनुको चिन्ता छैन भन्न - यो शिष्टता लागि अडान गरौं, रोमान्स र आवेग. किन अझै फिर्ता बस्न र उनको लागि यो प्रकारको कुरा गरेर तपाईं एक महिलालाई ल्याउन सक्छ खुशी आनन्द उठाउन छैन, तपाईं फेरि वा छैन उनको देख्न इरादा कि. तपाईं तब उचित हो कि ज्ञान आनन्द उठाउँछन् सक्छ, पूर्णतया कामकाज र स्वतन्त्र मानिस, एक महिला को उपचार गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ गर्ने, बस त्यो गर्न सक्छन् किनभने. गर्व.